Sawirro: Jaaliyadda reer Koonfur galbeed ee dalka Mareykanka oo xaflad taageero ah u dhigay musharax Cabdicasiis Laftagareen
arlaadi November 11, 2018 No Comments
Xaflad ay soo agaasimeen qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Koonfur galbeed ee dalka Mareykanka ayaa ka dhacday magaalada Columbus Ohio.
Xafladda oo ay kasoo qayb galeen dadweyne fara badan ayaa waxaa lagu taageerayay musharaxa madaxweyne ee maamul goboleedka Koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayada oo ay halkaas qudbado kasoo jeediyeen qaar ka mid ahaa dadweynihii kasoo qaybgalay xafladda iyo qaban qaabiyayaasha xafladda.
Dadkii ka hadlay xafladda oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Xasan Dheere, suldaan Fiqi oo ah suldaanka beesha Tunni ee Columbus, Madey Mad Ibdow, Abdikariin Mukhtaar, Zahra Moalin (Zahra Arlaadi) Idris Shariff Ali, Halimo Nour Mukhtar iyo dad kale.
Dhanka kale, xafladda ayaa waxaa heeso kusoo bandhigay fanaanka weyn ee Abdinur Daljir iyo fanaanada Safiyo Tusmo ayada oo ay dhanka kalena kooxda hidaha iyo dhaqanka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio halkaas kusoo bandhigeen cayaaro dhaqameed.
Xafladda ayaa waxa ay kusoo dhamaatay guul ayada oo ay dhamaan dadkii ka hadlay halkaas guul u rajeeyeen musharax Cabdicasiis Laftagareen.